Raha mbola eo i Andry Rajoelina dia tsy mbola miala ny krizy ! – MyDago.com aime Madagascar
Tonga teny an-kianja fitolomana toy ny mahazatra ny vahoaka tamin’ity Alakamisy 28 Aprily 2011 ity.
Ignace, solontenan’ny Moramanga dia namerina nampatsiahy ny tantara tamin’ny 2009 : ho anareo vahoaka nitolona teny amin’ny 13 Mai, mbola ao ve ilay kianjan’ny demokrasia sa anarana sisa ? Nisokatra ho any rehetra ve ireo haino amanjery mpanjaka ? Nihamora ve ny fiainana, ny vary, ny menaka…? Azo atao indray ve ny mivarotra tany amin’ny vahiny satria ao anatin’ny lalam-panorenana ? Ianareo very asa lasa mivarotra amoron-dalana enjehina isan’andro, mety aminareo ve izany ? Isaky ny miakatra ny solika, be ny mpandrahona, ankehitriny ny mampiakatra indray no mampitahotra, mety ve izany ? Nidina ve io vidiny io ankehitriny ? Nopaina ny SADC ary nolazaina fa mainty be mamatopatotra. Ankehitriny dia any foana no dia. Lasa fotsy be angaha ireo ? Sa mivavaka amin’ireo mihitsy ankehitriny ? Iza aminareo no afaka milaza hoe aiza ho aiza isika izao, tetezamita ve sa repoblika fahaVI ? ireo no fanontaniana napetrak’I Ignace tamin’ny kabariny androany.
Ny solombavam-bahoaka voafidy tany Anjozorobe kosa indray dia nametraka ahiahy: matohotra ny havoakan’ny SADC dia manao “africa raid” ny Fat hoy I Mamitiana RAVELONANOSY . Mety tsy ahazo fankatoavana iraisam-pirenena mihitsy koa i RATSIRAHOANA koa dia nampiana vazaha hoy izy.
Sarotra ny raharaha ary sahirana ny FAT hoy I Olivier RAKOTOVAZAHA : nampiditra mpanolon-tsaina vahiny mihitsy Ambohitsirohitra. Ny manahirana indrindra amin’ny dinika ifanaovana amin’I Andry Rajoelina hoy Rakotovazaha dia ny “eny lasa tsia, ny tsia lasa eny.”
Ny Printsy Elakovelo kosa dia nanambara fa tokony hanaiky fa tsy mahavita irery ny fitondrana ny tetezamita I Andry Rajoelina. Malgacho-malagasy foana ny teto ary nanaiky hatrany izy telolahy filoha teo aloha hoy ity zanak’I deba ity. Tsy I Camille Vital intsony ny olana eto Madagasikara fa ianao Rajoelina. Voasesika lainga nandritra ny roa taona mahery ny vahoaka. Tsy afaka ahilika amin’izy telolahy irery ny fahadisoana hoy izy .Miandradra fandresena amin’ny fivorian’ny SADC isika hoy hatrany izy. Ekenay raha omena ny ankolafy 3 sy ireo antoko matanjaka ny fitatanana ny tetezamita fa tsy misy Rajoelina kosa intsony hoy Elakovelo.
Rehefa ny vahoaka no mitolona dia ekeo ry tafika satria tafi-bahoaka ianareo. Raha mbola eo i Andry dia tsy mbola miala ny krizy ary izy telolahy tsy manaiky an’i Andry intsony ho filohan’ny tetezamita hoy ny kabarin’ny Printsy teto amin’ny Magro Behoririka.
Mifankatiava ihany raha mbola velon’aina…
Auteur Solo Razafy*Publié le 28 avril 2011 28 avril 2011 Catégories Magro, Malagasy, Politique
2 pensées sur “Raha mbola eo i Andry Rajoelina dia tsy mbola miala ny krizy !”
Ampy izay ny roa taona nijanona’ny fat teo amin’ny halatra NDAO HIHETSIKA SY HITROATRA ARY HANONGANA AMIN’IZAY RY MANAKASINA REHETRA AZA MANAO RESAKA BE INTSONY!
MASINA I MANKASINTSARA! NDAO!
Indrisy mantsy ry Masyteny !
Marina dia marina fa tokony hietsika, fa akory atao ???
Mbola miala sasatra ny ankabeazan’ny olona anie ê !!
Ny olona tokony nantenaina, mbola betsaka no reraka tamin’ny fikarakarana ny hetsika be an’ireo mbola tsy tonga saina ! Réunion des Non-Soucieux dite RNS !
Ny sasany indray mbola mankafia an’izato espace vaovao natsangana eran’ny tanàna, espace THB maskita ! Mbola manja lavitra noho izany hoe tolona izany, ny mirevy bebeksa sy tonotono !!! Tsy feherana ny mijery sokatry mihetsiketsika sy mangitakitaka !!! Revy io r’ilay Dada !!!
Raha ho faty aho matesa rahavana, ary raha ho faty rahavana matesa ny omby ( mba hanaovan-tsika maskita ) !!!!
Sondriana dia sondriana Ragasy amin’ity vongan-kena kely, fa etsy andaniny kosa Ravazaha mamango sy mitavana, mirevy baona miaraka amin’i Bolivood.
Eo no mifaly amin’ity mosakiky kely, fa ny sasany kosa ireo mitady ny lehibe kokoa !
Ka tian’ny risy ! Amin’na miliô ( de daolara )!!!
Précédent Article précédent : Andry Rajoelina, am-bavahoana ny …
Suivant Article suivant : De petites revendications à une grève nationale